Ama-movie amane okufanele abukwe kuNetflix kulo Mgqibelo obandayo ngoJanuwari | Izindaba zamagajethi
Ama-movie amane okufanele abukwe kuNetflix kulo Mgqibelo obandayo ngoJanuwari
Igagasi lamakhaza apholile? Ngihamba nge-hot, ne-Netflix nabantu bami. Ngamafuphi, amakhaza asika imigwaqo kususelwa eqhweni naseqhweni, ngaphezu kwalokho, akekho umuntu ofuna ukuphuma ngalesi sikhathi sonyaka. Uma sengeza ithambeka likaJanuwari kulokhu, asidingi izisusa eziningi zokuchitha intambama yonke sibuka ama-movie wethu weNetflix ngaphansi kwengubo esiyithandayo. Vele, thatha ithuba lokuya esitolo esethembekile ukuze uthole izimpahla ngendlela yokudla okulula neziphuzo ezibandayo. Sizokukhombisa ama-movie amane amahle wokuchitha lo Mgqibelo obandayo ngoJanuwari ku-Netflix. Uma ungenayo i-Netflix, ungavakashela ifayela le- ikhasi elihle kakhulu lokubuka ama-movie online.
3 I-Super Size Me (Yamadokhumentari)
Ukuqothulwa kwesintu kuyasicekela. Le ndaba izokwenza ucabange njenganoma iyiphi enye, ikhiqize ukubuyekezwa okuhle phakathi kuka-2014, sithola abalingisi abanjengo-Anne Hathaway, Michael Ciane noMathewu McConaughey. Ngenye yamafilimu athandwa ngabafundi bethu abaningi, futhi ungayibona namhlanje ntambama kuNetflix.
Kusukela esandleni sikaJennifer López sizophila le ndaba yokusola, uthando kanye necebo le-psychopathic. I-movie okuthi noma kungeyona engcono kakhulu esingayithola kuNetflix, okungenani ingabonakala futhi ngeke imuncu ntambama yethu. Jabulela le movie enothando futhi evusa inkanuko.
I-Super Size Me (Yamadokhumentari)
Kulokhu sizophinda sincome idokhumentari. Kulokhu, uMorgan Spurlock, ogcwele impikiswano ezindaweni zokudlela zaseNyakatho Melika, ukuthi wenza isivivinyo sokufuna ukwazi lapho kufanele adle khona "ukudla okusheshayo" futhi abone ukuthi lokhu kuyithinta kanjani impilo yakhe. Imiphumela iyamangaza, futhi izosusa isifiso sokubuyela kuma-franchise afana noMcDonalds noma uBurger King, konke kuya ngesifiso sakho.
I-American classic, imali, izimfihlo, ukunyakaza nokukhaphela. Ifilimu yango-1987 enabalingisi abanjengoMichael Douglas noCharlie Seen. Ungaphuthelwa, ngoba uzoyithanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ama-movie amane okufanele abukwe kuNetflix kulo Mgqibelo obandayo ngoJanuwari
USony umisa isibuyekezo se-Android Nougat ku-Xperia Z5
Iqiniso langempela ku-Nintendo switchch likhipha ubuhlanya be-inthanethi